ShweBo News – Page2– News And Media
ငွေယူပြီး အဆက်အသွယ်မရတော့တဲ့ နာမည်ကြီး တေးရေးဆရာကြောင့် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
အဆိုပိုင်းမှာရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်တဲ့ အဆိုတော် မင်းသမီးချောလေး ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ သူမချစ်ရတဲ့အနုပညာတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း သာယာတဲ့ ဘဝကိုရှေ့ဆက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမသီချင်းအပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး တေးရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ကတိဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့အကြာင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ၂ လအတွင်း သီချင်းရေးပေးမယ်ပြောလို့ ငွေ ၆ သိန်း လွှဲပြီးကာမှ အဆက်အသွယ်မရတော့တာမို့ ခွန်းဆင့်နေခြည်တစ်ယောက် တော်တော်လေးကို ပေါက်ကွဲနေတာပါ။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ငွေလွှဲပြီးကာမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး တေးရေးဆရာအကြောင်း ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ Read more
ကလေးတစ်ယောက်လိုသာ နေချင်သေးတယ်လို့ ​ပြောလာတဲ့ ယွန်းယွန်း
ယွန်းယွန်းက သရုပ်ဆောင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူကြီးကာရိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်အရှေ့ကို ရောက်လာခွင့်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးတစ်ယောက်လိုသာ နေချင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော်မလေး ယွန်းယွန်းက အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပရိသတ်တွေက ကလေးတစ်ယောက်လိုသာ မြင်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း လူကြီးကာရိုက်တာနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခွင့်မရသေးဘူးလို့ မီဒီယာအင်တာဗျူးတွေကနေတဆင့်ပြောပြလာပါတယ်။ ‘’ကလေးလိုပဲ မြင်နေကြတုန်းပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ညီမမျက်နှာက သိပ်အပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ အခုချိန်ထိလည်း လူကြီးကာရိုက်တာနဲ့ ပီပီပြင်ပြင်တစ်ကားမှ မရိုက်ပြရသေးဘူးဆိုတော့ ညီမကို ကလေး သရုပ်ဆောင်လို့ပဲ မြင်ကြမှာပေါ့နော်။ အဓိက ကတော့ ညီမအပေါ် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့တင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်’’ Read more
မိဘကျေးဇူးဆိုတာ မွေးပြီးလို့ ပစ်ထားခဲ့ရင်တောင်မှ မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ မကြည့်ပါနဲ့လို့ ဆိုလိုက်​တဲ့ မယ်​လိုဒီ
မယ်လိုဒီဟာ သူမရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မိဘကျေးဇူးဆိုတာ မွေးပြီးလို့ ပစ်ထားခဲ့ရင်တောင်မှ မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ မကြည့်ပါနဲ့လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရား၊ တရားကိုလည်း မမေ့ကြစေဖို့ အခုလို အကြံပြုစကားပြောထားပါသေးတယ်။ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီက သူမခံယူထားတဲ့ မိဘကျေးဇူးဆိုတာကို အခုလို ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်။ မိဘဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားချိန်ကစပြီး မွေးဖွားလာခဲ့နိုင်တာနဲ့တင် ကျေးဇူးတရားကြီးနေပြီလို့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာပါတယ်။ ‘’မိဘကျေးဇူးဆိုတာ စပြီးကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းကဖျက်မချဘဲ မွေးခဲ့တာနဲ့တင် ကျေးဇူးကြီးမားလှပါပြီ။ လူတန်းစေ့မထားနိုင်တာ ပညာမသင်ပေးနိုင်တာ ငယ်ငယ်ရိုက်ခဲ့တာတွေ ထမင်းနပ်မမှန်တာတွေ ရှိနေခဲ့ရင်တောင် ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်။အသက်ရှင် နေသရွေ့ ဘယ်အရာမဆိုကြိုးစား လို့ရပါတယ်။ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့၊ ဒုက္ခ ပြဿနာဖြစ်လေ ဘုရားများများဝတ်ပြုပါ၊ပြဿနာချက်ခြင်း ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး Read more
စည်းမျဉ်းအသစ် ၅ မျိုးနဲ့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဒ်ကလပ်အသင်းများ
၂၀၁၉၊၂၀၂၀ ရာသီမှာအသုံးပြုမဲ့ စည်းမျဉ်းအသစ်ကြောင့် အဲဗာတန်၊ လီဗာပူးနဲ့ အခြားသောပရီးမီးယားလိဒ်အသင်းတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာဖြစ်ထွန်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၉၊၂၀၂၀ ရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ လီဗာပူးအသင်းက မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နောက် ဒုတိယနေရနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရပြီး၊ အဲဗာတန်အသင်းကတော့ အဆင့် ၈ နေရာနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ Championship Play-off Final/ Champion League Final / Europa League Final တို့ ကျန်ရှိနေပေမယ့်လည်း ၊ လာမဲ့ရာသီသစ်မှာ အသုံးပြုမဲ့စည်းမျဉ်းအသစ်ကတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းအသစ်မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဒ်ကလပ်အသင်းတွေအတွက် အလားအလာကောင်းတွေများစွာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ VAR စနစ်ပါဝင်လာမယ်လို့ အစောပိုင်းကတည်းကသိရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း၊ Read more
ယူရိုပါလိဒ် Play-off တွင် Gaint Killer များနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေတဲ့ ဝုဖ် အသင်း
ပရီးမီးယားလိဒ် တန်းတက်အသင်းအဖြစ်နဲ့ ခြေစွမ်းကောင်းတွေဆက်တိုက်ပြထားနိုင်ခဲ့တဲ့၊ ပရီးမီးယားလိဒ်ရဲ့ Gaint Killer ကြီး ဝုဖ် အသင်းကတော့၊ မန်စီးတီးအသင်း FA ဖလားကိုရရှိသွားတာကြောင့် အဆင့် ၇ နေရာကနေ ၊ ယူရိုပါလိဒ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရဖို့သေချာသွားခဲ့ပြီ။ ဝုဖ် အသင်းအနေနဲ့တော့ ယူရိုပါလိဒ်ပြိုင်ပွဲကို Play-off အဆင့်ကနေစတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာမှ ဥရောပဆင်မြင့်ထက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဝုဖ် အသင်းကတော့ ၊ ယခင်နှစ်က ဘန်လေအသင်းလိုမျိုးထပ်မံလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယအဆင့် Play-off ကနေယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှာ အုပ်စုအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူရိုပါလိဒ်ဝင်ခွင့်အတွက် အသင်းပေါင်း Read more
သရုပ်ဆောင်မေကဗျာက အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်လွန်းတဲ့ သမီးလေး ဂင်္ဂါမေအကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။ အိမ်မှုကိစ္စတွေလည်း လုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်သလို၊ စီးပွားရေးဘက်မှာလည်း အထောက်အကူပေးနိုင်နေပါပြီတဲ့။ မေကဗျာက အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး ဂင်္ဂါမေ အကြောင်း အခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ အသက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေလည်း လုပ်နိုင်နေပြီလို့ Duwun Media ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ ‘’ ကဗျာတို့ဆိုလည်း ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ အမေ့ရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ နေလာတာ။ အမေ့စကားတစ်ခွန်းပဲ၊ ကိုယ်နဲ့ သမီးနဲ့က ညီအစ်မဖြစ်ပြီးတော့ အမေက Read more
အမှန်တရားဆိုတော့ နဲနဲတော့ ခါးတာပေါ့……🧐🧐🧐
အခုခေတ်မှာ 🧐🧐🧐 တက်တူးထိုးထားတဲ့သူက အိုက်တတ်လာတယ်. iPhone သုံးတဲ့သူတွေက အိတ်ကပ်မရှိတော့ဘူး. ဈေးကြီးနာရီပတ်ထားရင် ခြေထောက်ခဏခဏဖုန်ခါတယ်. ရွှေသွတပ်ထားရင် စကားပြောများလာကြတယ်.။ အခုခေတ်မှာ လက်မထပ်တဲ့သူတွေက လက်ထပ်ထားတဲ့အတိုင်းအတူတူနေတယ်. လက်ထပ်ထားတယ့် သူတွေက လက်မထပ်ထားသလိုပဲ ခွဲနေကြတယ်. တိရစ္ဆာန်တွေက လူတွေလို အကျီင်္င်္ဝတ်လာတယ်. လူတွေက တိရစ္ဆာန်တွေလို အသားတွေပေါ်လာကြတယ်. ကလေးက လူကြီးလို ရင့်ကျက်လာတယ်(၁၈+) လူကြီးက ကလေးလို ငယ်မူပြန်ချင်ကြတယ် (နွားအို မြက်နုကြိုက်) မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးလို မိုက်ရဲလာကြတယ်. ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေးလို ခြောက်လာကြတယ် ဆင်းရဲသားက ဂုဏ်အတွက် Read more
ခါးနာနေသောဝေဒနာရှင်က မိမိတစ်ခါတည်းစား၍ ကုန်နိုင်မည့်အနေတော် ထန်းလျက်သုးံလုးံကို လက်တွင်ဆုပ်ထားပါ ထို့နောက် အင်္ကျီချွတ်၍ ချောင်းသို့မဟုတ် မြစ်ထဲသို့ ဝေဒနာရှင်၏ “ချက်´´ ရေမြုပ်သည်အထိ ဆင်းပါ ။ ချက် ရေမြုပ်သည့် နေရာတွင် ရပ်၍ လက်ထဲတွင်ဆုပ်ထားသော ထန်းလျက်သုးံလုးံကို တစ်ခါတည်း ကုန်အောင်စားပါ စားပြီးပြီးခြင်း ရေမသောက်ရ ရေထဲမှ ပြန်တက်လာပြီး အဝတ်လဲကာ အဝတ်ခြောက်ဖြင့် ရေအားလုးံခြောက်သွားအောင် သုတ်ပစ်ပါ။ ပီးနောက် အင်္ကျီပြန်ဝတ် ချက်အောက်က အပူတရှိန်ရှိန် ထွက်နေခြင်းရပ်သွားမှ ရေတစ်ခွက် သောက်ပြီး ရေချိုးပါ Read more
ကြံရည်မှာ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက်များစွာ ပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက စံထားရလောက်အောင် သန့်ရှင်းပါတယ် ။ ဆိုင်တွေကိုလည်း ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စီစစ်လေ့ရှိပြီး Grade A , Grade B စသဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို ခွဲခြား ထားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကြံရည်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုး များစွာပါဝင်ကြောင်း တိုင်တန်းမှုများပြုလုပ်လာ တဲ့အခါ Read more
ထန်းရည်အရမ်းကြိုက်တဲ့ လူတွေအတွက် ကတော့ ရွှေဘဲဗျို့ ကင်ဆာရောဂါ၊ မျက်လုံးအမြင်အာရုံ နဲ့ နှလုံးရောဂါ စတာတွေအတွက် တကယ်ကို အကျိုးပြုစေတဲ့ အစွမ်းတွေရှိပါတယ်နော်
ထန်းရည်အချိုက ချိုပြီး အရသာလည်း ရှိတဲ့ သဘာဝထန်းပင်ကနေရတဲ့ ဝိုင်တစ်မျိုးပေါ့နော်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း နာမည်ကြီးတဲ့ သောက်စရာ တစ်မျိုးပါ။ အနောက် အာဖရိက၊ အာဖရိက အလယ်ပိုင်း၊ အာရှ၊ တောင်အမေရိက စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ထန်းရည်အချိုကို သောက်သုံးကြပါတယ်။ ကင်ဆာ ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေး ထန်းရည်အချိုမှာ ဗီတာမင် B2 လို့ လူသိများကြတဲ့ Riboflavin ဓာတ်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီဓာတ်က Antioxidant တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်Free Radicals တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။သာမန် ထန်းရည်အချိုကို အသင့်အတင့်သောက်သုံးပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် B2 ဓာတ်ကို Read more
Visitors today : 16,265
Page views today : 49,178
Total visitors : 98,066
Total page view: 250,238